Uchwepheshe we-Semalt: Indlela Yokuhlola Ukusebenza kwe-SEO
Abaningi abaphathi be-e-commerce bahloswe ngezikhundla. Bahlala behlola ku-Googleukuze kube khona into ekhombisa ukuthi i-rankings yabo ihamba ngcono. Lapho bebona izinguquko kwimiphumela yensiza yokusesha, bacabanga ukuthi bazoukusebenza kohlelo lokusesha (SEO) luhlelo olungenasici. Ngeshwa, lokhu akulona iqiniso ngaso sonke isikhathi.
uFrank Abagnale, iMenenja yokuPhumelela kweKhasimende i-Semalt Izinsizakalo Zedivaysi, ichaza izinto zangempela ezithinta simo sakho sewebhu nokusebenza - غسيل موكيت.
Ukuncintisana: Yini enye yokubeka?
Namuhla ukuncintisana sekuye kwaqhamuka izindlela ezijwayelekile zokucinga ezisetshenziswa yiukuncintisana. Wonke umnikazi wenkampani ye-e-commerce ufuna ukuthi isayithi liphumele abadlali bebhizinisi labo ukuze kuthuthukiswe ukubonakala, thola ukuchofoza nokwenzaukudayiswa. Kodwa-ke, imibuzo eminingi yokusesha ivule izakhi emiphumeleni yokusesha eyehlisa ukunakekelwa emiphumeleni evamile yemvelo bese ishayaukuhlunga phansi kwekhasi.
Ukwenza ngokwezifiso: Ubani obekayo?
Namuhla, izikhundla zihlelwe ngokwezifiso kangangokuthi azange zenziwe ngabanyeizikhundla zokusesha okuningi. Ngokuyinhloko, i-rankings umthengi ebona ku-iPhone yakhe izohluka ngezinga ozozibona kuthebulethi yakho nomaikhompyutha. Ngenxa yalokho, akekho ongasho ngokuqiniseka "Sibeka kuqala ku-Google!"
Ngokuvamile, izikhundla zenziwe ngezifiso ngokusekelwe ku:
Indawo. Lesi yisici esivamile kakhulu esithonya ukuzenzela ngezikhundla.Lapho izinjini zokusesha zikhomba indawo yomsebenzisi esebenzisa isignali yeselula noma ikheli le-IP yedivayisi, ziletha imiphumela yosesho ngokwezifiso.
ukusetshenziswa kwedivayisi. Izigaba ezivela kuma-Smartphones azifani nalokho okubonakalayokwideskithophu noma ithebhulethi. Amadivayisi weselula ngokuvamile athola izixhumanisi zokusebenza. Ngenxa yalokho, amasayithi anokuhlangenwe nakho okuphathekayo azobe ephakeme..Uma aumthengi ucwaninga okuthile ku-iPhone, imiphumela izohluka kakhulu kulokho okubonakala kwimiphumela yakho yedeskithophu.
umlando wosesho. Njalo uma ungena ku-akhawunti ye-injini yokusesha, injini yokuseshauthola ukufinyelela kuwo wonke umlando wakho wokusesha. Isibonelo esiphelele uma ungena ku-akhawunti yakho ye-Gmail kwikhompyutha yakho, injini yokusesha ingenai-akhawunti yakho yakwa-Google nokuseshwa kwe-Google. Lolu lwazi lusetshenziselwa ukwenza ngokwezifiso imiphumela yosesho ebonakala kudivayisi yakho.
ukuziphatha komphakathi. Ukusebenzisa amapulatifomu afana ne-Twitter ne-Google +, i-Google ithola ukufinyelela okugcweleekuziphatheni kwakho komphakathi. Lokhu kuchaza ukuthi kungani okuqukethwe okuvela kumikhiqizo noma kubangani kuboniswa emiphumeleni yakho yosesho, kodwa akuboniswa uma omunyeabantu baqala imibuzo yokucinga.
Ukubalwa kwabantu. Izinjini zokusesha zibeka wonke umsebenzisi eqenjini labantu abasebenzisa lawoukuziphatha okudlule ukuletha izikhangiso ezihlosiwe kakhulu.
Ngokusekelwe ezimweni ezibalulwe ngenhla, manje uyaqonda ukuthi imiphumela ye-injini yokusesha iyiniokwenziwe ngokwezifiso. Lezi zici zinikeza ubufakazi bokuthi kungani amathuluzi wokubika asezingeni eliphezulu angabuyisa idatha engaboniswa ngumuntu kumthengi ngisho nalapho usezingeni lakhoAmathuluzi akhombisa ukuthi usezingeni lokuqala lokuqala legama lakho elingukhiye. Ithemba angeke libone imiphumela efanayo kusukela ekupheleni kwayo okusho ukuthicishe ngeke bathenge kuwe. Lokhu kusho ukuthi uma ithuluzi lokubika eliphezulu lingakwazi ukunikeza idatha enembile ukuze kusize ibhizinisi lakho lenze imali, ngakho-keakuyona ithuluzi elithembekile lokubonisa ukusebenza.
Ukumela: Yiziphi amagama angukhiye okumele ukhethe?
Ukulandelana kwezitayela kusho ukuthi ukhetha isethi yamagama namagama angukhiye ongathanda ukuwasebenzisaHlela futhi uhlele ukusebenza kwesayithi lakho ngokubeka amagama kulawo mazwi. Imishwana oyikhethayo inekhono lokushintsha ukubukeka kwayoukusebenza kwakho.
Esikhathini esiningi, izinkampani zithola kulula ukusebenzisa imishwana namagama angukhiye asebevele ekhonausezingeni lokubandakanya umkhiqizo wabo noma amagama anomncintiswano ophansi. Lokhu ngokuvamile kwenza kube sengathi sengathi umsebenzi wabo we-SEO awunasici ngisho nalaphoakuyona.
Ngakolunye uhlangothi, amakhasi ngabanye angakwazi ukulinganisa izinkulungwane zemishwana encane kakhuluukufunwa. Lokhu kusekelwe kumqondo wamagama angukhiye amaningi abonisa ukuseshwa okungu-1,5,15 noma okuyi-60 nyanga zonke lapho konke okungeziwe ukushayela ithrafikhi kuqhathaniswa neAmagama angukhiye aphezulu kakhulu owalandela kumbiko wakho wesimo. Amagama angukhiye wokulandelela owabheka njengenani eliphakeme likushiya ukuthi ungaboni ukuthi kungenzeka yiniukuseshwa kwemisila eside.
Isikhathi: Isilinganiso sini?
Ukwahlukaniswa ngezigaba kunamanzi futhi kunomqondo ophansi. Ngenxa yalokho, ungasesha okuthandayoamagama angukhiye futhi uqaphele ukuthi akusekho ukuqala kuqala. Noma kunjalo, ungase uthole isimanga esimnandi ukubona ukuthi usezingeni lokuqala ngokuzayo lapho usesha.